जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित131 – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित131
दैनिक जीवनमा हामीले कैयौं संर्घष गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा केही सफलता त केही असफलता मिल्छ । तर जे काम गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन भने ज्योतिष शास्त्रअनुसार ग्रह दोष निवारण गर्नुपर्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
यसरी लगातार असफलता हात लागेमा केही उपायहरु अपनाउँदा सफलता मिल्ने विश्वास गरिन्छ । बार अनुसार निम्न उपायहरु अपनाउनुहोस्
आइतबार अर्थात साताको पहिलो दिन, घरबाट निस्कँदा पान वा सौंप खाएर निस्कनु होला । यसले तपाईको चाहाना अनुसारको काममा सफलता दिलाउने वा राम्रो फल प्राप्त गराउन मद्दत गर्छ ।
साताको दोश्रो दिन सोमबारको शुरुवात ऐनामा हेरेर मात्र यात्रा गर्नु शुभ मानिन्छ । सोमबार उठ्नासाथ आफुलाई ऐनामा हेर्नुहोस् । यसले तपाईको काममा सफलता दिलाउने गर्दछ । तर स्मरण रहोस् ऐना चर्केको वा फुटेको हुनुहुँदैन ।
मंगलबारको दिन घरबाट बाहिर निस्कदा सख्खर, मिठाई वा चिनिजन्य पर्दाथको सेवन गरेर मात्र निस्कनु होला । मंगलबार गुलियो सेवन गरेर घरबाट बाहिर निस्कनाले पुरै दिन राम्रो बन्नेछ ।
बुधबारको दिन धनियाको सेवन गर्नाले मनले चाहेको काम पुरा हुने तथा दिनभर सकारात्मक सोचको विकाश हुने देखिन्छ ।
बिहीबार दिनको शुरुवातमा पहेलो वस्त्रको धारण गर्नुपर्छ । साथै खानामा अनिवार्य जीरा समावेश गर्नुहोला । यसो गर्नाले बिहिबारको दिन शुभ हुने तथा काममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
हुनत कुनै पनि काममा जानु अघि दहिको सेवन गर्नाले सफलता पाउने विश्वास गरीन्छ । तर शुक्रबारको दिन घरबाट बाहिर निस्कदा दहिको सेवन गरेर निस्किएमा काममा सोचे अनुसारको सफलता पाउन सकिन्छ ।
बिदाको दिन अर्थात शनिबार घरबाट बाहिर निस्कदा अदुवाको सेवन गरेर निस्किएमा मनले चाहे अनुसारको काम बन्नेछ ।
Rare solar eclipse is still happening on 7th of Asar, if these 8 zodiac signs are ignored, it will be unfortunate!
म पनि हेर्छु कस्ले का’रबाहि गर्छ हामीलाई, मा’र्न आए पछि मा’रि’दिएको हो